CNC စက် မှအကောင်းဆုံး CNC စက် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
YU WEI INDUSTRY SUPPLY CO., LTD. အကောင်းဆုံးကိုဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်ပါသည် CNC စက် in Taiwanဤမြေကွက်၌အတွေ့အကြုံ .Years ကျနော်တို့အရည်အသွေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ဝေါဟာရ၌အကြှနျုပျတို့၏ကုန်ပစ္စည်းများအပြိုင်အဆိုင်များစေနိုင်ရန်အတွက်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဆက်လက်။ အများဆုံးဈေးမှာအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးထုတ်ကုန်များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အန္တိမပန်းတိုင်ပင်ဖြစ်သည်။ ဒီပန်းတိုင်ကိုနိုင်ဖို့အတွက်ကျနော်တို့အဆင့်မြင့်အပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများစတင်မိတ်ဆက်ကြပါပြီဟု, ထုတ်ကုန်တစ်ဦးသည်အလွန်မြင့်မားတိကျမှန်ကန်မှုကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်မေးခွန်းမေးစရာရှိပါကထိုကြောင့်, သင့်ကိုငါတို့ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ငါတို့ကဲ့သို့အမြန်ဆုံးသကဲ့သို့သင်တို့ကိုအဖြေပေးလိမ့်မည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ website သွားရောက်ကြည့်ရှုမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
ပုံစံ - SL-8
ဂိုဏ်း-type ကို tool ကိုကိုင်ဆောင်သူစနစ်ကမြင့်မားသည်-တိကျမှုနှင့်လျင်မြန်သော tool ကိုနေရာချထားခြင်းပြောင်းလဲခြင်း,tool ကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်အချိန်ကုန်သက်သာစေပြီးထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေသည်.
စီစဉ်ထားပါဝါ tool ကိုကိုင်ဆောင်သူစနစ်(ဝင်ရိုး/အချင်းဝက်မျဉ်း)machining အတွက်,တူး,tapping နှင့်အခြား machining စွမ်းရည်များ.
FANUC ကိုလက်ခံပါβစီးရီးဗိုင်းလိပ်တံမော်တာနှင့် servo မော်တာ.
မက်စ်.လှည့်ခြင်း Dia.:320 မီလီမီတာ
Spindle drive မော်တာ:၁၁/၁၅ kw
X/Z ၀ င်ရိုးရထားလမ်းဒီဇိုင်းသည်ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ကိုသက်သာစေပြီးကုန်ပစ္စည်းတိကျမှုကိုလည်းတိုးတက်စေသည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cnclathemachine.com.tw/my/cnc-lathe.html
အကောင်းဆုံး CNC စက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် CNC စက် ၏အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊